Igama Plater Holder Factory, Abahlinzeki - China Igama Plater Holder Abakhiqizi
Sula i-Acrylic Business Card Holder Display Office Stand Desktop Name Card Card Organiser
I-MOQ ubuncane be-oda lobuningi 400pcs, Ubungako obuningi, bushibhile. Ukupakisha ama-24pcs / ctn Usayizi owenziwe ngokwezifiso 9.7 × 3.5x5cm Ilogo Ungenza ngokwezifiso i-logo oyifunayo, kepha ayikwazi ukwephula umthetho. Isisindo 50g / pc Umbala ocacile wombala, isikhathi esimnyama Isikhathi sesampula izinsuku eziyi-7 Isikhathi sokudiliva ama-3000sets kungakapheli izinsuku eziyi-10 Isikhathi Sokukhokha T / T EXW 30% T / T kusengaphambili, ukhokhe ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa kwenani le-FOB L / CL / C ngaphezu kwe-50,000 usd, singamukela i-L / C ku ...
Iziphathi Zezimpawu ze-Acrylic ezibekiwe nge-Ncwajana Pocket Desktop Plastic Sign Holder Display
Izinto ezisezingeni eliphakeme ze-Acrylic Materials (PMMA) ze-OEM & ODM Iphakheji eyamukelwe Isikhathi Sesampula Esingakapheli Izinsuku Ezingu-5 Ilogo Iyatholakala ekuphrinteni naku-Custom Logo Shape Square noma yenza ngezifiso ikhwalithi engu-100% yokuqinisekisa ikhwalithi Inani le-Factory Competitive Direct Price Ubulukhuni obukhulu nobukhulu bezinto Izici Zanamuhla, zinhle , indawo ebushelelezi
Izicathulo ezingabonakali ze-Acrylic zibonisa isibambo sokuma sama-super mall
Igama lomkhiqizo: Izicathulo ze-Acrylic ezingabonakali zibonisa isibambi sokuma se-mall enkulu.Izinto: Umbala we-Acrylic Umbala Umsebenzi Wokubamba Izicathulo, Ukupakisha ama-500pcs / ctn Usayizi wokupakisha
Izinkuni Base Acrylic Ithebula Umshado Sign Umnikazi For Sheetsign Abanikazi
Izinkuni ze-Oak kanye ne-Acrylic ephezulu ye-Acrylic eyi-10 yezisekelo zezinkuni futhi kusulwe amaSpredishithi e-Acrylic. Lezi ziphathi zamakhadi zilula kahle, ziqedile ngokhuni futhi zibushelelezi, Zisindayo futhi zihlala isikhathi eside, isisekelo sokhuni sine-groove ebude, Amashidi e-acrylic acacile abukeka njenge-crystal, angafaka izinkuni eziyisisekelo kalula. Sebenza kahle njengezitendi zezinombolo zethebula, abaphathi bezimpawu ezincane noma abaphathi bekhadi lemenyu. Ilungele i-cafe, irestshurenti, isitolo sokudayisa, umshado, iphathi, idili, i-buffet, ishawa yomshado noma imiphi imicimbi yokugubha. Izinkuni ta ...
Idizayini elula yegama Plate Acrylic Name Card Holder
Umkhiqizo Wempahla Acrylic Eco-friendly, Plexiglass, Perspex, Lucite Imininingwane 1. Ilogo yokudweba yamukelekile. 2. Usayizi ungenziwa ngezifiso noma ezinye izidingo. 3. Ubukhulu bungaba ngu-5,8,10mm, noma enye into eyenziwe ngezifiso 4. Amabhodi acacile e-acrylic angabonakali. 5. Imiphetho ipholishiwe. Izinzuzo 1. Umnikazi wekhadi lamagama acrylic ahlukahlukene akhiqizwe yithi awusizo kakhulu futhi asesimweni semfashini. 2. Zonke izinto eziphethe ikhadi le-acrylic ezenziwe ngephepha lepulasitiki eliphakeme. 3. Igama le-acrylic ...
Isiphathi sekhadi lebhizinisi i-acrylic display stand, i-acrylic ecacile umnikazi wekhadi lebhizinisi ledeski
1.I-acrylic yethu yokubonisa ikhadi inokukhanya okuphezulu, ukwakheka okulula, umphumela omuhle wokubonisa. 2. Yenza umkhiqizo wakho uhehe futhi uhehe. 3. Siza ukukhuthaza ukuthengiswa komkhiqizo wakho. 4. Ifanele inkampani, ihhotela, umbukiso, izitolo ukubonisa ikhadi lebhizinisi. 5. Amakhasimende design wamukelekile. 6. 100% Umkhiqizi onokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-15. 7. Ukukhethwa Kwezinto Ezihamba Phambili Okuvela Kumhlinzeki Onokwethenjelwa. 8. Ama-oda Amancane Amukelwe Nomjikelezo Wokukhiqiza Okusheshayo. 9.I-Merchandiser ezinikezele ne-QC ...
Acrylic Rotating Khombisa Ithebula Card Sula Ukukhangisa Itende Card Stand
Igama lomkhiqizo Isiphathi semenyu yetafula eliseceleni lesithupha ohlangothini Umbala Usayizi Osobala 180 * 180MM Ubukhulu 4MM MOQ ama-PC ayi-100 OEM / ODM Iyatholakala futhi Iyamukelwa Izinto ze-Acrylic Packing Carton
Isibonisi sezibuko ze-Acrylic, Magnetic Acrylic Sign Iziphathamandla, Isibali Sophawu Lokusinda, Ukuboniswa kwewashi elijikelezayo le-Acrylic, Isibambo Esibekiwe Sodonga, Acrylic Block Sign Umnikazi,